Somalitalk.com Online Community. Caddaawe Column
04 Dec 2000 - 26 Nov 2004
QOWMULUUDNIMO CAADIYEYN QASABA
Muhammad Dhubat (Caddaawe)
[English Version Read Here]
TORONTO, CANADA- (Muhammad Dhubat(Caddaawe) Golaha Iskuulada Degmada Toronto ee loo yaqaan "Toronto District School Board" ayaa go'aansaday in ay ka hirgeliyaan iskuulada dadweynaha ee Degmada Toronto barnaamij la yiraa Anti-homophia, Sexual Orientation Policy, waxayna aqbaleen hirgelintiisa December 15, 1999.
Barnaamijkan ayaa saameynaya dhammaan dadka isticmaala iskuulada dadweynaha ee Goluhu masuulka kayahay, dhammaan dadka u shaqeeya ama la shaqeeya Golaha. Sidoo kale wuxuu Barnaamijkani saameynayaa heerkasta Ardada, Shaqaalaha, Waalidiinta, Taraastiiyada, Voluntaaska, Soobooqdayaasha, Qandaraasleyda, iyo Shirkadaha Golaha la shaqeeya.
Ujeedada barnaamijkan ayaa ah in caadi aan dhiblahayn loo arko qowmuluudnimada, sidana lagu gaaro manhajka waxbarashada. Tusaale ahaan qaybta manhajka 3.4.1."Curriculum" ee barnaamijkan la soo wado ayaa waxay leedahay sidan "ensuring that the principles and practices of sexual orientation permeate the curriculum in all subject areas;" oo macnaheedu yahay "in la hubiyo aasaasyada iyo dhaqamada qowmuluudku in uu ka dhexduso(ku faafo) manhajka waxbarashada dhammaan maadooyinka heerkasta."
Qayb kale wuxuu manhajku leeyahay waa in la sameeyaa barnaamijyo dhiira gelinaya dhammaan ardada si ay ugu dhalato rajo sare si ay u qaataan dhaqamo ama shaqo aan dhaqamadii hore lagu aqoon.
Manhajkan qeybta qowmuluudnimada ayaa trustiigu go,aansadeen iyagoon la tashan bulshada, taasoo sharciga qilaafsan. Qeybaha kale ee manhajkan trustiigu bulshada way kala tashadeen, sida Anti-racism iyo Human rights, laakiin midkan waxay bulshada ula tashan waayeen waxay ogyihiin in aan dadweynuhu aqbaleyn. Sidaas darteed waxay go,aansadeen in haddii aan laga yeeleynin ay si qarsoodiya dadka ugu qariyaan.
Waxaa halkaas ku cad in dhaqan gelinta barnaamijkan saameynayo dhammaan heerarka waxbarasho ee Iskuulada dadweynaha laga bilaabo Kindergarten ilaa dugsi sare. Tusaale waxaa barnaamijkani barayaa Cabdi ama Caasho dhigta Kindergartenka in la lahaado labo hooyo ama labo aabbe in ay tahay caadi sida ay caadi u tahay in la lahaado hal aabbe iyo hal hooyo. Markii ilmuhu gaaraan grade kale waxaa diyaar u ah in la baro in qowmuluudnimadu caadi tahay laguna dhiiri geliyo in qofkii rabaa noqonkaro, iyadoo weliba la tusayo sawiro iyo filimo sameynaya nolol ama dhaqamo jinsi ah.
Hadaba waxaa lagama maarmaana in waalidiinta iyo waxgaradkuba barnaamijkan ku baraarugaaan deg-degna wax looga qabto waayo qatar halisa ayaa ilmaheena ka soo gaaridoonta barnaamijkan.
Waa in la ogaadaa marnaba kama soo horjeedno dad xaquuqdood, laakiin waxaan difaaceynaa in aan marnaba lagu xadgudbin xaquuqdeena aan xaqa sharcigaa u leenahay. Marnaba ma ogolin in qof lagu yiraa waxaad tahay qaniis ama la dafiro xaquuqdooda sharcigaa, laakiin waxaan dooneynaa in aan anaga iyo ilmaheenaba lagu qasbin ka qeyb qaadasho barnaamij duminaya diinteena.
Marka la eego United Nations Universal Declaration on Human rights, Canadian Charter of Rights and Freedoms, iyo Ontario Human Rights Code, waxaan xaq u leenahay ku dhaqanka dhaqankeena iyo badbaadinta dhaqankeena. Sidoo kale Golaha Iskuulada Toronto waxaa qawaaniintooda ka mida in dadkoo dhami ay xaquuq siman leeyihiin, sidaas darteed waxaa jiray barnaamij loo gudbiyay Golaha sanadkii hore oo ahaa Meeleynta baahida Diimaha "Faith Accommodation" kaasoo difaacaya waxa kasta oo ka soo horjeeda dadka diimahooda. Ilaa hadana barnaamijkaas Goluhu ma ogolaan.
Waxaa haboo in arimahan la sameeyo si aan u helno xaquuqdeena.
La xiriir principalka schoolkaaga af iyo qoraal una sheeg in arintani tahay xadgudub xornimada diintaada(violation of your religious freedom).
La xiriir trusteega xaafadaada af iyo qoraal una sheeg in arintani tahay xadgudub xornimada diintaada(violation of your religious freedom), waxaad ka helikartaa magaca iyo taleefanka trusteegaaga hadaadan a qoon principalka schoolka ilmahaaga ama taleefan buuga white pageska.
La xiriir waalidiinta iyo bulshada kale ee arintan ku howlan sidii wax looga qaban lahaa si wada jira.
Ka qayb gal kulamada joogtadaa ee schoolka ilmahaaga ka dhaca sida, school council meeting, school teachers meeting iyo parent school meeting kana hadal arintan qatarteeda.
Wargeli dadka kale.
Kaqaybgal doorashooyinka tarastiiga November 13,2000 sidii loo dooran lahaa tarastii fiican.
Waxaa nasiib ah in aan ku noolnahay wadan aad xaquuqdaada si xor ah u raadsan karto, ee halaga faa'iideysto nasiibkaas oo yeysan dayacaad nagu dhaafin.
Waxaa jira qofkii rabaa in uu helikaro warqad ay diyaariyeen waalidiin is xilsaaray oo diyaara, taasoo tifaftiraysa dhammaan xaquuqda waalidka, ahna wargelin sharci. Hadaba waxaa qofkasta oo waalida laga rabaa in uu warqadan si deg-dega principalka skuulkiisa ugu geeyo isagoo buuxinaya meelaha banaan si haboon, koobina kala har.
Waatan warqadda loogu talagalay in waalidiintu principalkooda ugeeyaan, koobiyaal kalana waalidiinta kale ugudbi si ay iyaguna principalkooda ugu geeyaan.
Guji halkan si aad u daabacatid wardadda waalidiinta. [buuxbuuxi meelaha bannaan unageey madaxa dugsiga carruurtaadu dhigato].
Halkanna waxaa qofkii rabaa ka akrisankaraa manhajkan Sexual Orientation faahfaahintiisa oo English ku qoran.
. Thu, January 24, 2002
HTML waa barnaamij aad u sahlan oo kamida barnaamijyada lagu dhiso bog kasoo baxa shaashada shabakada Internetka. hadda waxaad barankartaa barnaamijkaas oo ku tarjuman Afka Soomaaliga.
Waa barnaamij kamid ah kuwa dadka ugu badan akhristaan marka laga hadlayo barnaamijyada kusoo baxa Somalitalk, ee ha u dayma la'aan in aad soo booqatid
Waa laba-toddobaadle oo Cabdirisaaq Maxamed uu kaga hadlo arimaha laxiriira Islaamka
Waa laba-toddobaadle oo cabdi Guuleed uu ku faaleeyo qoraalka uu u bixiyey "Codka Aamusanaha"
Waa qoraalo laxiriira bulshaweynta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa jooga casrigan
Waa barnaamij toddobaadle ah oo lagulafaguro faraqa u dhexeeya caqliga suuban iyo fasahaadka
HABEEN & MAALIN
Waa todobaadle lagu eego arimaha Soomaalida ee toddobaadkaas taagan
RA'YI - OPINION
Waa qayb ay dadweynuhu ku cabiraan aragtidooda
. Get your free website now
. Get your free email now!